လေထိုးရုပ် သည် ၂၀၀၉-ထုတ် ဂျပန် အချစ်ဇာတ်ကား ဖြစ်ပြီး ဟီရိုကာဇူ ကိုရီအီဒါ ရိုက်ကူးသည်။ ရိုရှီအိ ဂိုဒါရေးသည့် ရုပ်ပြကို ဇာတ်လမ်းတည် ရိုက်သည်။ အသိစိတ်ဝင်သွားသည့် လေထိုးရုပ်၏အချစ်ကို ရိုက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ကြိမ်မြောက် ကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် ဗွေဆော် ...
၂၀၁၂ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသည် ဒါရိုက်တာ ရိုလန် အမ်မရစ်ချ် ၏လက်ရာ ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ရုံတင်ပြသသည့် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် အကြောင်း ဇာတ်အိမ်တည်ကာ ရိုက်ကူးထားသည့် ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ပါဝင်ရိုက်ကူးကြသည့် သရုပ်ဆောင်များမှာ ဂျွန် ကူးဆက်ခ် ၊ Chiwetel Ejiofor ၊ အ ...
ကွန်ဖြူးရှပ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသည် ဒါရိုက်တာ ဟူမေ၏ လက်ရာ တရုတ် အတွေးအခေါ် ပညာရှင် ကွန်ဖြူးရှပ်၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိဆန်ဆန် ဇာတ်ကား တစ်ကားဖြစ်သည်။ ဤဇာတ်ကားတွင် ဟောင်ကောင် အက်ရှင်မင်းသားကြီး ကျိုးရွန့်ဖား က ကွန်ဖြူးရှပ်အဖြစ် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ ဤဇာတ်ကားကိ ...
ဒါရိုက်တာ တွမ် ဟူးပါ ၏ လက်ရာ ဘုရင့်မိန့်ခွန်း သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်ကို အခြေခံရိုက်ကူးထားသည့် ဒရာမာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ ယင်းဇာတ်ကားသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည့် အော်စကာဆုပေးပွဲ၌ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားဆု၊ အကော ...
လူမှုကွန်ရက် အမည်ရှိ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသည် လူမှုကွန်ရက် ဝက်ဘ်ဆိုက် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အား တည်ထောင်ခဲ့ပုံနှင့် တရားရေး အရှုပ်အရှင်းအကြောင်း ရိုက်ကူးထားသည့် ဒရာမာ အမျိုးအစား ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား တစ်ကားဖြစ်ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ရုံတင်ပြသခဲ့သည်။ ယင်းဇာတ်ကား၏ ဒါရိုက်တ ...
တိတ်ဆိတ်နေခဲ့သော ဟုလည်း အမည်တွင်) သည် ၂၀၁၁ တောင်ကိုရီးယား ပြဇာတ် ရုပ်ရှင် ဖြစ်ပြီး ဂုန်ဂျီယောင်း ရေးသားသည့် လုံ့လဟူသော ဝတ္ထုပေါ် အခြေခံထားကာ၊ ဂုန်ယူးနှင့် ဂျန်းယူမိက ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ ၎င်းသည် ဂွမ်ဂျူး အင်ဟွာ နားမကြားကျောင်း၌ ဖြစ်ပွား‌ခဲ့သော ...
နိဗ္ဗာန်ဘုံတွင် လမ်းပျောက်ခြင်း သည် ၂၀၁၁ခုနှစ်တွင် ထွက်ရှိလာသည့် ဗီယက်နမ် ရုပ်ရှင်ကားတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဒါရိုက်တာ Vũ Ngọc Đãng မှရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ ပထမဦးဆုံး လိင်တူချစ်သူများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ရိုက်ကူးထားသည့် ဇာတ်ကားဟုလည်းဆိုနို ...
အာဒမ်ရယ် ဧဝရယ် ဒသရယ် ဇာတ်ကား သည် Heart & Soul ဗီဒီယို ထုတ်လုပ်ရေးမှ ဖြန့်ချီလိုက်သော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပုညခင်၏ အချစ် သို့ ဝင်္ကဘာ ဝတ္ထုကို ဒါရိုက်တာ ဝိုင်းက ပြန်လည် ဇာတ်ညွှန်းရေး ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဓိက သရုပ်ဆောင်များအဖြစ် ပြေ ...
အိမ်ဖော် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသည် စာရေးဆရာမ ကက်သရင်း စတော့ကက် ၏ ဝတ္ထုကို အခြေခံ ရိုက်ကူထားသည့် ဇာတ်မြူး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ဖြစ်သည်။ ဇာတ်လမ်းမှာ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ် အမေရိကန် လူမှုအခွင့်အရေး နိုးကြားလာတဲ့ ကာလအတွင်း လူဖြူ မိန်းမပျို ယူဂျီးနီးယား စကီးတာ ဖယ်လန် နှင ...
Skyfall သည် အီယွန် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး ၏ 007 ဂျိမ်းစ်ဘွန်း ရုပ်ရှင်များအနက် ၂၃ ကားမြောက် သူလျှိုဇာတ်ကား ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး ဒန်နီယယ် ခရိဂ် မှ အဓိကဇာတ်ကောင် ဂျိမ်းစ်ဘွန်းအဖြစ် တတိယအကြိမ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင် ထားပြီး ဒါရိုက်တာ ...
Amazon Alexa သည် Amazon မှ ထုတ်လုပ်ထားသည့် virtual assistant တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို Amazon Lab126 က တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားသည့် Amazon Echo နှင့် Amazon Echo Dot smart speakers များတွင် ပထမဆုံး အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည် အသံဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည ...
ကျွန်မက နှင်းဆီပါမောင် သည် ၂၀၁၅ ခုထွက် မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ဖြစ်သည်။ ဒါရိုက်တာ ဝိုင်း ရိုက်ကူးပြီး နေတိုးနှင့် ဖွေးဖွေး အဓိကပါဝင်သည်။ ၂၀၁၅ ခု၊ မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆုပေးပွဲတွင် အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆုကို ဖွေးဖွေးက လည်းကောင်း၊ ဒါရိုက်တာဆုကို ဝို ...
ဘန်ကောက်မှ မန္တလေးသို့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးသည် မြန်မာ-ထိုင်း ချစ်ကြည်ရေးအဖြစ် ရိုက်ကူးထားသော ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်ပါသည်။ ထိုရုပ်ရှင်ကားကြီးတွင် မြန်မာနာမည်ကြီသရုပ်ဆောင်များဖြစ်ကြသော နေတိုး၊ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်နှင့် ထိုင်းသရုပ်ဆောင်မင ...
ဘူဆန်သို့ ရထား သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် တောင်ကိုရီးယား ဖုတ်ကောင် အထိတ်တလန့် ဇာတ်ကားဖြစ်ကာ ဒါရိုက်တာ Yeon Sang-ho ရိုက်ကူးပြီး ဂုန်ယူး၊ ဂျန်ယုမီ နှင့် မာဒုန်စွတ် တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ ရုပ်ရှင်ကားကို ၂၀၁၆ ကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် မေလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် အထူ ...
Wish Upon ဇာတ်ကားသည် အမေရိကန် သဘာဝလွန် ကြောက်လန့်ဖွယ် ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်ပြီး John R. Leonetti မှရိုက်ကူးပြီး Barbara Marshall မှ ဇာတ်လမ်းရေးသားကာ သရုတ်ဆောင်များအဖြစ် Joey King, Ryan Phillipe, Elisabeth Rohm, Ki Hong Lee, Shannon Purser, Sydney ...
ကြောက် ကြောက် ကြောက် သည် ၂၀၁၇ ခုထွက် မြန်မာ ရင်သိမ့်တုန် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ဖြစ်သည်။ သတ္တမအာရုံ ရုပ်ရှင်အတွက် ငြိမ်းချမ်းကျော်၏ ဇာတ်လမ်းကို နေစိုးသော်နှင့် လွင်မင်းအံ့တို့ ဇာတ်ညွှန်းရေးပြီး ဩရသ ရိုက်သည်။ နေတိုး၊ ခင်ဝင့်ဝါ၊ ထွန်းထွန်း၊ နန်းမြတ်ဖြိုးသ ...
ခေါက်ထီးလေး မလုံ့တလုံ သည် ၂၀၁၇ ခုထွက် မြန်မာရုပ်ရှင် ဖြစ်သည်။ စမ်းစမ်းနွဲ့ ၏ ဝတ္ထုကို သင်္ကေတ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက် ဒါရိုက်တာ မီးပွား ရိုက်ကူးသည်။ မင်းမော်ကွန်း၊ စိုးပြည့်သဇင်၊ အေးမြတ်သူတို့ အဓိကပါဝင်ထားပြီး ဧပြီလ ၂၈ ရက်၌ ရုံတင်သည်။
ချစ်သောပါဘလို သည် ဗဂျီးနီးယားဗလက်ဟို၏ မှတ်တမ်း Loving Pablo, Hating Escobar ပေါ်အခြေတည်ပြီး ဖာနန်းဒို လီယွန် ဒီ အရန်နိုအာ ရိုက်ကူးသော ၂၀၁၇ ခုနှစ် အင်္ဂလိပ်စကားပြော စပိန် ဒရားမာရုပ်ရှင်ကား ဖြစ်သည်။ ၇၄ ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော် အများပြည ...
စစ်မှန်သော သည် တောင်ကိုရီးယား ရုပ်ရှင် ဖြစ်ပြီး၊ TMS အင်တာနက် ကာတွန်းဇာတ်ကောင်ကို မှီငြမ်းထားသည်။ ဒါရိုက်တာ လီဆာရန်း ဖြစ်ကာ၊ ကင်ဆုဟွန်း၊ ဆောင်းဒုန်းအီ၊ လီဆောင်းမင်၊ ဆူလီ နှင့် ဂျိုဝူဂျင်း တို့ ပါဝင်သည်။ ဇွန်လ ၂၈, ၂၀၁၇ တွင် စတင် ထုတ်လွှင့်သည်။
ည ရုပ်ရှင်သည် ဒါရိုက်တာထူးပိုင်ဇော်ဦး ရိုက်ကူးသည့် သည်းထိတ်ရင်ဖို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်သည်။ မျက်နှာသစ်ဇာတ်ဆောင် ၁၀ ဦးနှင့် ရိုက်ကူးထားသည်။ လူငယ်များအကြား စနောက်ရာမှ စတင်သည့် နာကျည်းမှု၊ ပြဿနာနှင့် ကြုံလာလျှင် ကြောက်ရွံ့ကာ သွေးကွဲတတ်မှု တို့ကိ ...
နေဝင် အိပ်တန်းတက် သည် ၂၀၁၇ ခုထုတ် မြန်မာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ဖြစ်သည်။ လင်္ကာရည်ကျော်၏ ဝတ္ထုကို ဝိုင်း ဇာတ်ညွှန်းခွဲ ရိုက်ကူးသည်။ ပြေတီဦး၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗို၊ ပိုင်ဖြိုးသုနှင့် ရဲမွန်တို့ အဓိက သရုပ်ဆောင်ထားသည်။
ပင့်ကူလူသား အိမ်ပြန်လာခြင်း သည် ၂၀၁၇တွင် ထွက်ရှိသော အမေရိကန် လူစွမ်းကောင်းရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး မာဘယ်ကာတွန်းများမှ ပင့်ကူလူသား ဇာတ်ကောင်ကို အခြေခံထားသည်။ ကိုလံဘီယာ ရုပ်ရှင်နှင့် မာဘယ်စတူဒီယို တို့ ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ပြီး ဆိုနီ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက ဖြန့် ...
Type 001A လေယာဉ်တင်သင်္ဘော သည် တရုတ် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းဖြစ်ပြီး ၂၆ ဧပြီလ ၂၀၁၇ တွင် ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် တွင် အသုံးပြုရန် ရေချ၍ တပ်တော်ဝင်ခဲ့သည်။ ဤလေယာဉ်တင်သင်္ဘောသည် တရုတ်နိုင်ငံအတွက် လေယာဉ်တင်သင်္ဘော လျောင်နင်း ပြီးလျှင် ဒုတိယမြောက် ...
၂၀၁၇ ခုနှစ် လန်ဒန်မာရသွန် ပြိုင်ပွဲအား ၂၃ ဧပြီလ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုပြိုင်ပွဲသည် ၃၇ ကြိမ်မြောက် ကျင်းပသော လန်ဒန်မာရသွန် ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီး အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့ ၌ နှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့ရာ ပြိုင်ပွဲဝင်အများအပြား ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြသေ ...
၂၂ မေ ၂၀၁၇၊ ကန်အဆိုတော် အရီယာနာ ဂရန်ဒီ ၏ ဖျော်ဖြေပွဲ ပြီးနောက် အင်္ဂလန်၊ မန်ချက်စတာမြို့၊ မန်ချက်စတာဇာတ်ရုံ၌ အသေခံဗုံးခွဲမှု ဖြစ်ပွားသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အတည်ပြုချက်အရ တိုက်ခိုက်သူမှာ ဆာမန် ရမဒန် အဘဲဒီ ဖြစ်ကာ ၂၂ နှစ် ရှိသော လစ်ဗျားလူမျိုး ဗြိတိန်နိုင ...
Avengers: Infinity War မှာ အမေရိကန် စွမ်းအားရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ ဤကားမှာ Avengers နှင့် ၂၀၁၅ တို့၏နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီ ၂၃ တွင် လော့စ်အိန်ဂျလ်တွင် အထူးပွဲပြသကာ ၂၇ ရက်နေ့တွင် တစ်ကမ္ဘာလုံး၌ ရုံတင်ပြသခဲ့သည်။ ရိုက်ကူးမှု၊ effect၊ အက်ရှင ...
ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် သည် ၂၀၁၈ ခုထွက် မြန်မာရုပ်ရှင် ဖြစ်သည်။ ထားဝယ်ရုပ်ရှင်အတွက် ဦးစိုးသိန်း ထုတ်ပြီး မီးမီး ဇာတ်လမ်းရေးသည်။ ဇာတ်ညွှန်းနှင့် ဒါရိုက်တာမှာ ဝိုင်း ဖြစ်သည်။ အလင်းရောင်၊ ကျော်ထက်အောင်၊ ဖွေးဖွေး၊ ရတနာဗိုတို့ အဓိကပါဝင်ကြသည်။ ဇူလိုင်လ ၂ ...
မီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသည် ဒါရိုက်တာ ဏကြီး ရိုက်ကူးပြီး ဗစ်တိုရီးယား ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး မှ ဖြန့်ချီမည် ဖြစ်သော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ခု ဖြစ်သည်။ စာရေးဆရာမကြီး ကြည်အေး၏ မီ ဝတ္ထုကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားသည့် ဇာတ်ကားဖြစ်ကာ ပိုင်ဖြိုးသု၊ နေတိုး၊ ရဲအောင်၊ မင်းဦး ...
မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ ဇာတ်ကားသည် အမျိုးသမီး ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီ ပွဲဦးထွက်ရိုက်ကူးခဲ့သော ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ဇဏ်ခီ၊ လှယဉ်ကျေး နှင့် နန်းဝေဝေထွန်းတို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော dramatized documentary ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်သည်။
မုန်းစွဲ သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ရုံတင်ပြသခဲ့သော ဘာသာရေး ဒရမ်မာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ဖြစ်သည်။ ဒါရိုက်တာ ဩရသ ရိုက်ကူးပြီး နေတိုး၊ မင်းသွေး၊ ဖွေးဖွေး၊ ကျော်ကျော်ဗိုလ်၊ အေးဝတ်ရည်သောင်း တို့က အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပြီး ၊ ဇွဲဝေယံထူး၊ ဇွဲဝေယံထက် အမွှာ ကလေးသရုပ ...
ဥပါယ်တံမျဉ် သည် ဖျော်ဖြေရေး ရုပ်ရှင် အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး ပရိတ်သတ် အားပေးမှုများပြားခဲ့သော ရုပ်ရှင်များထဲတွင် တစ်ကား အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီ ရိုက်ကူးပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရုံတင်ပြသခဲ့သည်။
Stand by Me Doraemon သည် ဒိုရာအဲမွန်း မန်ဂါစီးရီးကို အခြေခံသော ဂျပန် သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ် ကာတွန်းရုပ်ရှင်ဖစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ ရူအီချီ ယာဂီ နှင့် တကာရှီ ယာမာဇာကီ တို့ ရိုက်ကူးခဲ့ကာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ရုံတင်ပြသခဲ့သည်။ It was released on 8 August 2014. ရုပ်ရှ ...
Weathering with You သည် ၂၀၁၉ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ရုံတင်မည့် ဒါရိုက်တာ မကိုတို ရှင်းကအိ မှ ရေးသားရိုက်ကူးပြီး CoMix Wave Films ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သော ဂျပန်အန်နီမဲ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ဖြစ်သည်။ အသံသရုပ်ဆောင်များ အဖြစ် ကိုတရို တအိဂေါ့ နှင့် နန မို ...
ငန်းရိုင်းကန် The Wild Goose Lake သည် ၂၀၁၉ တရုတ် စိန်ပြေးတမ်း ရာဇဝတ်-ရင်ဖိုကား ဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာမှာ တျောက်ယိနန်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၉ ကိန်းနက်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် ပြသရန် ရွေးချယ်ခံရသည်။
တော်ကီးန် သည် ၂၀၁၉ ထွက် အမေရိကန် အတ္ထုပ္ပတ္တိ ဒရာမာဇာတ်ကား ဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ ဒုမ်း ကာရူကိုစကီ ရိုက်သည်။ ဒေးဗစ် ဂလီဆန်နှင့် စတီဖင် ဘာရက်ဖို့တို့ ဇာတ်ညွှန်းရေးကြသည်။ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ပါမောက္ခ ဂျေ အာ အာ တော်ကီးန် ၏ အစောပိုင်းဘဝကို တူးဆွထားခြင်း ဖြစ ...
ထာဝရနှောင်ကြိုး သည် ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီ၏ တတိယမြောက် ရုပ်ရှင်ကားကြီးဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရုံတင်သည်။ အဓိကသရုပ်ဆောင်များအဖြစ် ဇဏ်ခီနှင့် ပိုင်ဖြိုးသုတို့ ပါဝင်သည်။ ဇာတ်ဝင်ခန်းများကို ပူတာအိုနှင့် ငွေဆောင် ...
ဒိုရေမွန်​:နိုဘိတ၏​ လပေါ်စူးစမ်းရေးခရီးစဉ်မှတ်တမ်း သည် ဂျပန်သိပ္ပံခေတ်လွန် အန်နီမေးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤရုပ်​ရှင်​ကို၂၀၁၉-မတ်လ​-၁ ရက်​၌ရုံတင်၍ စတင်ပြသခဲ့သည်။ ဤကားသည် ဒိုရေမွန်​တို့အုပ်​စု၏ လပေါ်စူးစမ်းရေးခရီးစဉ် အကြောင်းဖြစ်သည်။
လှပ်၍ လွင့်သော သည် ၂၀၁၉ ခုထွက် မြန်မာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ဖြစ်သည်။ စံပယ်ဖြူနု၏ လှပ်၍လွင့်သော ကမ္ဘာ ဝတ္ထုကို ဝိုင်း ဇာတ်ညွှန်းခွဲ ရိုက်ကူးသည်။ ကျော်ရဲအောင်၊ မို့မို့မြင့်အောင်၊ ဖွေးဖွေး၊ ခင်ဝင့်ဝါတို့ အဓိက ပါဝင်ထားကြသည်။ မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ရုံတင်သည်။
သူစိမ်းအိမ် ရုပ်ရှင်သည် ၂၀၁၉ခုနှစ်က ရုံတင်ပြသခဲ့သော မြန်မာရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်သည်။ဒါရိုက်တာထူးပိုင်ဇော်ဦး၏ ဒုတိယမြောက်ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပြီး လွင်မိုး၊ ရှိန်း၊ ချာလီ၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗို၊ လင်းဇာနည်ဇော်၊ ဖွေးဖွေး၊ မြတ်နိုးအေးတို့က အဓိကသရုပ်ဆောင်ထားသည်။ဤဇ ...
အချို့သောတူးမြောင်းများ၌ ရေပြင်ညှိဆည်များ တပ်ဆင် ထားသည့်အကြောင်းကို ကြားဖူးကြပေမည်။ ရေပြင်ညှိဆည် ဆိုသည်မှာ တူမြောင်းအတွင်း မြင့်ရာမှ နိမ့်ရာသို့ဖြစ်စေ၊ နိမ့် ရာမှ မြင့်ရာသို့ဖြစ်စေ သင်္ဘောများ တက်ဆင်းသွားလာနိုင် အောင် ရေမျက်နှာပြင်ကို နှိမ့်ပေး၊ ...
မြဂနိုင် သည် ၁၉၃၄ ခုနှစ်က ရိုက်ကူးခဲ့သော မြန်မာအဖြူအမည်း အသံတိတ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ခု ဖြစ်သည်။ မြဂနိုင် ရုပ်ရှင်ကို ယူနက်စကို ကုလသမဂ္ဂ ပညာရေး သိပ္ပံနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ၏ အာရှ ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ အမွေအနှစ် အဖြစ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ မြဂနိုင ...
ညွန့်ဝင်းမှ အနော်ရထာမင်းအဖြစ် အောင်ခိုင်မှ ငရမန်ကန်းအဖြစ် ထက်ထက်မိုးဦးမှ မဏိစန္ဒာအဖြစ် ပန်းဖြူမှ သမ္ဘူလမိဖုရားအဖြစ် လှိုင်ဖြူဖြူထွဋ်မှ ရွှေအိမ်သည်မင်းသမီးအဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြသည်။ မေသန်းနုမှ အပယ်ရတနာမိဖုရားအဖြစ် လူမင်းမှ ကျန်စစ်သားအဖြစ် ညီနန ...
ခုနှစ်စဉ်အလွမ်း ရုပ်ရှင်ကို ဒါရိုက်တာမောင်ဝဏ္ဏက ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ ခုနှစ်စဉ်အလွမ်း ရုပ်ရှင်၏ မူရင်းဝတ္ထုကို စာရေးဆရာမင်းလူမှ ခုနှစ်စဉ်အလွမ်း အမည်ဖြင့် ရေးသားခဲ့သည်။ ခုနှစ်စဉ်အလွမ်း ရုပ်ရှင်တွင် အမျိုးသားသရုပ်ဆောင် သုမောင်၊ ရူပ နှင့် အမျိုးသမီးသရုပ်ဆ ...
ငဘ ရုပ်ရှင်သည် ၁၉၆၁ခုနှစ်တွင် ဒါရိုက်တာ ဦးချစ်ခင် ရိုက်ကူးသော မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား တစ်ကား ဖြစ်သည်။ စာရေးဆရာ မောင်ထင်၏ ငဘ ဝတ္ထုကို အခြေခံ၍ရိုက်ကူးထားခြင်း ဖြစ်ပြီး ဖိနှိပ်ခံလယ်သမားများ၏ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသောဘဝကို ပုံဖော်ထားသည်။ အဆိုပါ ရုပ်ရှင်တွင် ညွ ...
နှောင်းတမြေ့မြေ့ သည် ၁၉၇၅ ခုတွင် ရိုက်ကူးသော မြန်မာရုပ်ရှင် တစ်ကားဖြစ်သည်။ ဥက္ကလာရုပ်ရှင်အတွက် မြတ်ထန်၏ ဝတ္ထုကို မောင်၀ဏ္ဏ ရိုက်ကူးပြီး ဇော်လွင်၊ သုမောင်၊ ဗဂျီအောင်စိုး နှင့် ချိုပြုံးတို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၅ ခု၊ ဩဂုတ်လ ၂၂ ရက်တွင် ရုံတင်ပ ...
ဘိသိက်ပြိုင် သည် သဘင်မဂ္ဂဇင်းတွင်ပါရှိသော ရွာစားစိန်တင်ဟန် ၏ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်မှန် ဆောင်းပါး "ဘိသိက်ဆရာဆားတောင်သောင်း" ကို အခြေခံလျက် ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ကွက်ဖွဲ့ထားသော ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ ဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင်ဆေကိန္ဒ ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် ဇာတ်ညွှန်း ချ ...
မောင့်မူပိုင်ရှင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသည် ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ဒါရိုက်တာ ကိုစန်းအောင် ရိုက်ကူးခဲ့သော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ဖြစ်သည်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်က မန္တလေးရုပ်ရှင်မှ ဒါရိုက်တာအောင်ဝင်း ရိုက်ကူးခဲ့သော မောင့်မူပိုင်ရှင် ဇာတ်ကားကို သရုပ်ဆောင် ဒွေး၊ လွင်မိုး၊ ထွန်းအိန္ ...
သူရဲကောင်းလေးများ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသည် ခုနှစ်တွင် မာလာဦးရုပ်ရှင်မှ ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ခဲ့သော ကလေး သရုပ်ဆောင်အများအပြား ပါဝင်သည့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကား ဖြစ်ပါသည်။ ဝတ္ထုမှာ ကလေး သူငယ်ဝတ္ထုများဖြင့် စာပေဆုများ ရရှိခဲ့သော စာရေးဆရာ တက္ကသိုလ်မောင်အောင်ဆွေ၏ ...